The Best Tech Gif for Usuku lukaTata | Iindaba zeGajethi
U-Eder Esteban | | Amazon, ngokubanzi
Usuku kaTata uyeza. Ke ngoko, unokuba ujonge izipho zalo mhla ukhethekileyo. Kuya kusiba ngakumbi nangakumbi ukwenza izipho ezingafane zifane ngalo mhla. Ke ubheja kwizipho zetekhnoloji. Ukukhethwa kule ndlela kubanzi, ke zonke iintlobo zezipho zinokwenziwa malunga noku. Sishiya uluhlu lwezinto onokukhetha kuzo kule ndawo.
Lo nto Ukuba ubukhangela izimvo zesipho ngalo mhla kaTata, kuya kuba lula kakhulu kuwe ukufumana enye enomdla kuwe. Iinketho ezilungileyo zokuba ubaleke kwizipho eziqhelekileyo ngeli xesha.
1 Uhlobo lweWebhuwwhite
2 I-Amazon Fire TV Stick
4 I-Olimpiki IPEN E-PL8
5 I-WD ipasipoti yam- i-4 TB ephathekayo kwiHard Drive
8 GoPro HERO7 Mhlophe
9 I-Omars ibhetri yangaphandle 10000mAh
I-Kindle Paperwhite zezona modeli zaziwayo ngaphakathi kuluhlu lwee-eReaders zefemu yaseMelika. Uluhlu olo Sele ikwimarike iminyaka elishumi, apho zibekwe njengabathengisi abaphambili. Kunyaka ophelileyo le Paperwhite ihlaziyiwe ngezinye izinto ezintsha. Kuba ngoku ayinamanzi, ukongeza ekubeni nendawo yokugcina engaphezulu. Ke unokuba neencwadi ezingakumbi kuyo. Ngaphandle kwamathandabuzo, isipho esifanelekileyo kolu Suku lukaTata, kwabo bazali bathanda ukufunda, ngakumbi ngelixa bekwiholide.
Singayifumana le Kindle Paperwhite kwi Ixabiso le-129,99 euro namhlanje. Ungayivumeli ukuba ibaleke!
Uhlobo lwePhepha elimhlophe -...Thenga apha »/]
Enkosi kwiAmazon Fire TV Stick iyakwenza njalo ukwazi ukuguqula umabonwakude ube yi-smart TV ngendlela elula. Kuba kufuneka uqhagamshele isixhobo kuyo kuphela. Ngale ndlela, uya kuba nakho ukufikelela kwisixa esikhulu somxholo wokusasaza. Kuba kukho iiapps ezinjengeNetflix, iVidiyo yeNkulumbuso yeAmazon okanye iYouTube kuyo, phakathi kwezinye izinto ezininzi. Ke ngoko kuya kubakho ukubukela uthotho lwakho oluthandayo kumabonwakude ngesi sixhobo. Ukongeza, ikwabonelela ngokufikelela kwinani elikhulu lemidlalo. Inketho elungileyo yokwenza i-TV yakho ibe yi-Smart TV.
Le Stick yeAmazon yoMlilo inokuba njalo thenga okwethutyana nge-39,99 euro (ixabiso laso eliqhelekileyo ngama-59,99 euros). Ke ungayithenga ngoSuku loBawo ngesaphulelo esihle.
Intonga yeTV yoMlilo | ISISEKO ...Thenga apha »/]
Kubazali beembaleki ngakumbi, Isongo somsebenzi esifana neXiaomi Mi Band 3 lukhetho olufanelekileyo lokujonga. Isizukulwana sakhe sesithathu sele. Ivumelanisa kunye ne-smartphone yakho kwaye yenza kube lula ukwenza imidlalo. Iya kubala amanyathelo, ubale iikhalori ezitshisiweyo, ugcine umkhondo wenqanaba lentliziyo, ukongeza kwimisebenzi enjengokuvumelanisa imiyalezo, iifowuni, izikhumbuzo zekhalenda okanye ulawulo lokulala. Ngamafutshane, gqibezela. Inebhetri ethembisa uluhlu lweentsuku ezingama-20.
Le bracelet yeXiaomi inokuba njalo thenga okwethutyana ngexabiso lama-euro angama-20,11 (Ixabiso eliqhelekileyo ngama-29,99 euros). Ke ungaphoswa sesi saphulelo sihle kuso.
Xiaomi Mi Band 3 -...Thenga apha »/]
I-Olimpiki IPEN E-PL8
Le khamera iyi-16 MP. Enye yezinto zokuqala ezitsalela ingqalelo kuyilo lwayo, enefuthe le-retro ecacileyo ngokusetyenziswa kwesikhumba kuyo. Ikhamera edibeneyo, eyenza kube lula ukuyiphatha kunye nawe ngamaxesha onke. Ikwavumela ukuba urekhode ividiyo ngesisombululo esipheleleyo se-HD ngamaxesha onke. Inesikrini esine-intshi ezintathu apho ubona yonke into esiyenzayo, ukongeza ekuqwalaseleni izinto ezithile kuyo. Ikwanayo ne-WiFi, evumela ukuba idityaniswe nezinye izixhobo ngendlela elula.
Le khamera yemini kaTata inokuthengwa ngexabiso lama-euro angama-449 kwiAmazon. Ikhamera esemgangathweni, eyindlela elungileyo ukuba utata wakho uyathanda ukufota.
IOlimpus IPEN E-PL8 -...Thenga apha »/]
I-WD ipasipoti yam- i-4 TB ephathekayo kwiHard Drive
Imveliso engalahlekiyo kumakhaya amaninzi yi-hard drive ephathekayo. Indlela elungileyo yokugcina amaxwebhu abalulekileyo, iifoto okanye iifayile zikhuselekile. Nokuba ivela emsebenzini okanye yobuqu, kulungile ukuba ube nesipele kwesi sixhobo. Le hard drive inomthamo we-4 TB. Ke uya kuba nendawo eyaneleyo engaphezulu kuyo. Ukongeza, unokukhetha phakathi kwemibala emininzi eyahlukeneyo, kuxhomekeke kukhetho ngalunye. Kuya kufuneka kwakhona kukhankanywe ukuba le Western hard drive ye-Western iza nokukhusela iphasiwedi kunye nokubethelwa kwehardware.
Okwexeshana ukwi ixabiso le-112,80 euros, xa ixabiso laso eliqhelekileyo li-euro eziyi-159,99. Ke ngoko, lithuba elihle lokucinga. Ungayivumeli ukuba ibaleke!
WD ipasipoti yam, iDiski ...Thenga apha »/]
Kulabo bakwabiwo-mali olukhulu, isiphelo esiphezulu seSamsung yeyona ndlela ilungileyo enokuqwalaselwa. Isamsung isishiye nale Galaxy S10, Ukucaciswa kwazo kunokubonwa apha, ngoFebruwari. Isiphelo esiphakamileyo esiye sayihlaziya ngokupheleleyo uyilo. Ukongeza, izinikele ngokucacileyo ekufotweni kule fowuni. I-smartphone esemgangathweni esemgangathweni, kunye nokusebenza kakuhle kwaye ngaphandle kwamathandabuzo sisipho esimangalisayo soSuku lukaBawo.
Ingathengwa eSpain ukusukela ngala Lwesihlanu uphelileyo. Kwabo banomdla kwisiphelo esiphakamileyo, Kuyenzeka ukuba uyithenge ngexabiso lama-euro angama-909.
I-Samsung Galaxy S10 -...Thenga apha »/]
I-Amazon inoluhlu olubanzi lwezithethi. Nangona besothusile sonke ngokusungulwa kweAmazon Echo Show, engowokuqala wegama lokungena kunye nescreen esakhelweyo. Le yinto evumela ukuba kwandiswe ukusetyenziswa kwesi sithethi ngendlela ephawulekayo, njengoko sele kubonwe kuhlalutyo lwayo. Inketho elungileyo yokwenza ukuba ikhaya lakho libukrelekrele kancinane kwaye ezinye izinto zilula kancinci, enkosi kubukho be-Alexa kuyo.
Esi sithethi sebrendi sinokuba njalo thenga namhlanje ngexabiso lama-euro angama-229,99. Isipho esahlukileyo salo mhla kaTata.
Umboniso we-Echo (2 ...Thenga apha »/]
GoPro HERO7 Mhlophe
Olunye ukhetho olulungileyo ngoMhla kaTata, kwabo bazali bezemidlalo, yikhamera yesenzo sezemidlalo. Enkosi ngayo, uya kuba nakho ukuba nemifanekiso emihle ngayo yonke imidlalo oyenzayo, nokuba uhamba ngebhayisekile okanye ngokusefa. Kuba le khamera inethuba lokuntywiliselwa, ngokungathandabuzekiyo inika abasebenzisi ukhetho oluninzi. Le khamera iyi-10 MP, ukongeza kukuvumela ukuba urekhode ividiyo kwi-1080p. Yeyoluhlu lweHero, nangona yahlukile kwimodeli yonyaka ophelileyo.
Ingathengwa kwi- Ixabiso le-euro ezingama-198 okwethutyana, kuba ixabiso laso eliqhelekileyo ngama-euro angama-219,99.
GoPro HERO7 Mhlophe -...Thenga apha »/]
I-Omars ibhetri yangaphandle 10000mAh
Sigqibezela uluhlu ngale bhetri yangaphandle ye-10.000 mAh. Olukhetho oluhle lokugcina engqondweni, ukuze ukwazi ukubiza ifowuni ngalo lonke ixesha xa ungekho ekhaya. Ingakumbi kwabo bantu kufuneka basebenzise umnxeba wabo omninzi emsebenzini kunokuba yinto elungileyo. Ineendidi ezimbini zokufaka, ezenza ukuba zihambelane nazo zonke iintlobo zee-smartphones ngendlela ekhululekile ngokwenene. Ibhetri elungileyo yangaphandle, ngexabiso elifanelekileyo.
Kuba iyafumaneka I-euro ezingama-14,99 kuphela kwiAmazon.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » Amazon » Ezona zipho zihle zeSuku loTata
Iwebhu (WWW) ibhiyozela: ijika i-30